Ifulethi kwi-d. Art Mile - kufutshane neYunivesithi yaseDanube
Malunga ne-60m2 indlu kwindlu edwelisiweyo ye-baroque kwidolophu endala yaseStein - indawo efanelekileyo yokutyelela i-Krems art miles, kunye nohambo kunye nephenyane lokuhamba nge-Wachau World Heritage Site. Nkqu nombindi wesixeko saseKrems kunye neDyunivesithi yaseDanube zikumgama wokuhamba.
Indawo eyi-60m2 ekwiDolophu eNdala yaseSteiner ecaleni kweKunstmeile ngokunjalo nepier yezikhephe zabakhenkethi eziya eWachau. Umbindi weKrems kunye neDyunivesithi yaseDanube zikumgama wokuhamba.
Iinxalenye zesakhiwo sethu esidwelisiweyo sele singabalelwa kumaXesha Aphakathi. Iyeyeyentsapho ukusukela kwiminyaka yoo-1970 kwaye sizama ukuyigcina, ukuyiphucula kwaye siyihombise.
Iinxalenye zesakhiwo sethu sembali zikhona ukususela kumaxesha aphakathi. Yeyosapho lwethu ukusukela ngeminyaka yee-1970 kwaye sizama ukuyiphucula kwaye siyihombise.
Indawo yokuhlala inomnyango wayo.
Indlu inesango lokungena.
Xa ubhukisha abantu aba-3 okanye ngaphezulu, igumbi lokulala lesibini elinendawo yalo yokuhlambela liyafumaneka.
Ukuba indlu ibhukishelwe abantu aba-3 okanye ngaphezulu igumbi lesibini elinegumbi lokuhlambela liya kwenziwa lifumaneke.
Asifikeleli kuzo zonke iimfuneko zokuhlala ngokukhuselekileyo kumntwana (umzekelo, amanyathelo) - kodwa sisonwabe kakhulu ngeentsapho ezibhukisha nathi.
Ibhedi (ukhuko lokuhamba olunokutshintsha) kunye nesitulo esiphezulu ziyafumaneka.
Kwisakhiwo esifana nesi, asikwazi ukuqinisekisa zonke iikhrayitheriya zokusingqongileyo ekukhuseleni abantwana - nangona kunjalo iintsapho zamkelwa ngobubele. I-travelcot, i-pad yokutshintsha kunye nesitulo esiphezulu sinokubonelelwa.
I-gastronomy eyaneleyo ikumema ukuba uhlale kwindawo ekufutshane - ukusuka kwiikhefi ukuya kwiibhari ze-Heurigen eziqhelekileyo, iindawo zokutyela, iipizza, iibhari zebhiya, njl., phantse yonke incasa iya kufumana umdlalo.
Kwinduli engasentla kweStein - iSteiner Hund, okanye iKreuzberg unombono omangalisayo phezu kwesixeko, emazantsi ukuya eGöttweig, ekupheleni kwempuma yeWachau kwaye kwiimeko ezintle kakhulu zemozulu unokubona phantse ukuya eVienna.
Kwindawo ekufutshane ne-gastronomy eyaneleyo imema ukuba uhlale-eqhelekileyo "Heurigen", iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela, iipizza, ii-pubs - phantse yonke incasa inokwaneliswa.
Kwiinduli ze-abough Stein, kukho umbono omangalisayo phezu kwesixeko saseKrems, emazantsi ukuya kwi-monastery yaseGöttweig, ekupheleni kwempuma ye-Wachau kunye neemeko zemozulu ezintle ungabona phantse iVienna.
Ekubeni thina njengentsapho sithanda ukuhlala ezindlini xa siseluhambeni, siyayazi into ethandwa ziindwendwe. Sijonge phambili ekwamkeleni kwaye sinethemba lokuba ukuhlala kwakho nathi kuya kukhunjulwa ngobubele.
Sihlala umgangatho omnye phezulu kwisakhiwo esinye kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Ekubeni thina njengentsapho sithanda ukuhlala ezindlini xa siseluhambeni, siyayazi into ethandwa ziindwendwe. Sijonge phambili ekwamkeleni kwaye sinethemba lokuba ukuhlala kwakho n…